Zanakavavin’ilay Mpanao Didy Jadona taloha no voafidy ho Filoham-Pirenena ao Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2012 15:15 GMT
Tamin'ny 19 Desambra 2012, Park Geun-hye dia voafidy ho Filoham-pirenena vaovao ao Korea Atsimo. Izy dia avy amin'ny antoko elatra havanana Saenuri party sady zanakavavin'ilay mpanao didy jadona taloha Park Chung-hee.
Na dia teo aza ny zava-bitan'i Park amin'izao izy vehivavy voalohany voafidy ho Filoham-pirenena ao anaty fiaraha-monina izay ny lehilahy no loholona izao, ireo tanora liam-pandrosoana sy tia fihetsiketsehana dia manohitra mafy an'i Park, ny anton'izany dia noho ny antoko politika izay misy azy malaza ho mpanao kolikoly ary koa ilay fihetsika toa manjavozavo no sady tsy manaja an'ilay rainy mpanao didy jadona. Ny rain'i Park, Park Chung-hee dia iray amin'ireo olona nampisara-kevitra indrindra tao anatin'ny Tantara maoderina tao Korea Atsimo – noho ilay fitondrana jadona nataony sy ilay fampandrosona ara-toe-karena lehibe vitany nandritra ny natantanany ny fahefana.
Ny hazakazaka an-tery sy ny fizarazaran'ny fanjakana mazava tsara amina fanontaniana maro sy karazana antoko politika dia mampiseho ny toetry ny politika misy eo amin'ny Firenena. Indrindra moa fa ilay hazakazaka dia tena nifanety tokoa sady sarotra vinaniana, eny na dia ora maro aty aorian'ny fivoahan'ny valim-pifidianana aza.
Park Geun-hye nandritra ny fampielezan-kevitra, nofahanan'i Flickr 박근혜 공식앨범 (CC 2.0 BY-NC-SA)
Maro ireo mpiserasera ao amin'ny aterineto no miampanga ny fampahalalam-baovao mahazatra ao Korea Atsimo mitongilana any amin'i Park nandritra ny volana maromaro; indrindra ny fitaterana ny fampielezan-keviny izay zara raha mampahatsiahy ny lafiny ara-tantara. Notsindrian’[ko] izy ireo fa ny tatitra iraisam-pirenena dia manonona hatrany ny Rainy isaky ny manao fampidirana momba an'i Park izy ireo. Nanoratra i ‏@comeback_mj23[ko]:
Rehefa alohan'ny hatory aho dia mitety ny fampahalalam-baovao any ivelany sady mamaky ny lohatenim-baovao mikasika ny fifidianana Filoham-pirenena (toa ny BBC, CNN, NYT sns). Tsy azoko notsinontsinoavina fa fehezanteny iray no niraisan'izy rehetra ireo. Fehezanteny iray izay tena tokony ho resahina. Mety hahafoana izany lohateny izany ve io ramatoa io? [naoty: fampatsiahivana fa i Park dia zanakavavin'ilay mpanao didy jadona]
@aannyeong nanoratra [ko] mikasika an'i Lee Jung-hee, vehivavy mpanohitra iray izay nandrava an'i Park tamin'ny fanontaniana rehetra nandritra ny ady hevitry ny samy mpifanandrina ho Filoham-pirenena, saingy niala an-daharana tamin'ny hazakazaka ihany koa.
Lee Jung-hee dia nahavita namoaka zavatra maro izay na dia ny fiaraha-monina Koreana sy ny fampahalalam-baovao koreana aza tsy mahasahy miresaka izany — amin'izao rivotra ady hevitra prezidansialy ao amin'ny fahitalavitra izao. Mampalahelo fa tsy tena nahatakatra tsara ny marina ny olona na dia taorian'ilay ady hevitra aza.
@kbsmuckraker dia nanampy [ko]:
Nandrasana fatratra ny valin'ity fifidianana Filoham-pirenena ity. Amina toe-javatra izay anjakazakan'ny Network TVs sy ny Cho-Joong-Dong [naoty: anarana fanta-bahoaka hiantsoana gazety telo malaza any Korea Atsimo – fitambaran'ny teny hoe Chosun, Joongang ary Donga] eo amin'ny ady hevitra an-karihary ary manohana an'i Park daholo, sarotra ny hahita vokatra hafa. Raha tsy afaka mamaha ity vonan-kery ana fampahalalam-baovaon’ ny antoko havanana ity isika, dia mbola hiatrika toe-javatra mafy kokoa amin'ny ho avy.
@stpstp919 nanoratra [ko] tweet iray nizara fa amin'ny fomba ahoana no hahafahan'ireo fianankaviana maro amin'ireo firenena telo aziatika hitazona ny fahefany eo amin'ny fitondrana ho an'ny taranaka fara-mandimby.
Ny tweetn'i Yumiri dia niteny “Raha maharesy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Korea Atsimo i Park, dia ho hahita ilay zanakavavin'ny Park Chung-hee sy ilay zafikelin'i Kim Il-sung (ao Korea Avaratra) ary ny zafikelin'i Nobusuke Kishi (mampahatsiahy an'i Shinzo Abe) hiaraka eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Moon Jae-in, kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko mpanohitra demokratika mitambatra, nandritra ny fampielezan-kevitra, nofahanan'i Flickr moonjaein (CC 2.0 BY-NC-ND)
Ity fifidianana ity dia nahavita nanamontsana ny taha-pavitrihan'ny mpifidy, 75.8% [ko], izay ambony indrindra tao anatin'ny folo taona. @realolol nanadihady mikasika [ko] izany:
Namaky ity lahatsoratra ity tamina habaka mahagaga iray aho “Izany fiakaran'ny taha-pahavitrihan'ny mpifidy izany dia nanambara fa mahara-baovao ara-politika ny vahoaka. Na izany aza, amin'io fotoana io ihany, fa matoa nahita fisondrotana avo dia avo toy izany ny taha-pahavitrihana, dia mampiseho ihany koa fa efa betsaka ireo fitarainana nitambatambatra sy fotoan-tsarotra tao anelanelan'ilay fifidianana Filoham-pirenena teo aloha sy ny amin'izao fotoana izao.